आईपीएल : दिल्ली क्यापिटल्स विजयी, राजस्थान रोयल्स १३ रनले पराजित – Upahar Khabar
प्रकाशित मिति : २९ आश्विन २०७७, बिहीबार ०७:४७ October 15, 2020
काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा राजस्थान रोयल्सलाई १३ रनले हराउँदै दिल्ली क्यापिटल्स विजयी भएको छ ।
दिल्लीले निर्धारित २० ओभरमा राजस्थानसामु १६२ रनको लक्ष्य पेश गरेको थियो । जवाफी ब्याटिङमा राजस्थानले ८ विकेटको क्षतिमा १४७ रन मात्र बनाउन सक्यो । ओपनरद्वय जोस बटलर र बेन स्टोक्सले पहिलो विकेटका लागि ३७ रनको साझेदारी गरे । जोस बटलरले २२ रन बनाए । उनलाई नोर्कियेले बोल्ड गरे । त्यसपछि आएका कप्तान स्टिभ स्मिथले खराब खेल खेले । उनी एक रनमा क्याचआउट भए ।
अन्तिम ओभरमा राजस्थानलाई जितका लागि २२ रन आवश्यक थियो । तर युवा बलर तुषार देशपाण्डेले केबल ८ रन दिए र श्रेयस गोपालको पनि विकेट लिए । राहुल तेबतिया १४ रनमा नटआउट रहे । दिल्लीका तुषारले ३७ रन खर्चिएर २ र एनरिक नोर्कियले ३३ रन दिएर २ विकेट लिए । नोर्किय म्यान अफ द म्याच भए ।
यसअघि दिल्लीका कप्तान श्रेयस अय्यरले टस जितेर पहिले ब्याटिङको निर्णय लिएका थिए । दिल्लीले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै १६१ रन बनाएको थियो । दिल्लीका लागि शिखर धवनले अर्धशतक पूरा गरे । उनले ३३ बलमा ६ चौका र २ छक्काको मद्दतमा ५७ रन योगदान गरे । कप्तान श्रेयस अय्यरले पनि ४३ बलमा ३ चौका र दुई छक्काको मद्दतमा ५३ रन बनाए ।
बिहिबार कस्तो रहला ? यस्तो भन्छ तपाईँको राशिफल !!
तिहारपछि मन्त्रिपरिषदमा व्यापक पुनर्गठन हुने